Isikhokelo somthi - Izinto ezi-11 ofuna ukuzazi malunga neMithi
Jonga Imithi ongeke Ube nayo
Imithi ikhona yonke indawo. Umthi ngowona mveliso ocacileyo kwaye ophawulekayo uya kubona xa uvela ngaphandle. Abantu banomdla kakhulu ngemithi ehlathini okanye emthini kwididi yabo. Esi sikhokelo somthi siya kunceda ukwanelise loo nqwenelo kwaye uchaze umthi ngokubanzi.
Indlela uMthi okhula ngayo
I-sapling kwi-stub ehlathini. (Alanzon / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
Umncinci omncinci womthi ngokuqinisekileyo uyaphila "izilwanyana". Ngephesente enye yomthi ephilileyo kodwa uyaqiniseka ukuba isebenza ixesha elide! Icandelo eliphilayo lomthi okhulayo ngumboniso omncinci weeseli phantsi kwe-bark (ebizwa ngokuba yi-cambium) kunye namaqabunga kunye neengcambu. I-meristem ye-cambi ingaba yinye kwiiseli eziliqela kwaye ixanduva lomsebenzi omkhulu kakhulu weMvelo - umthi. Kaninzi "
Imithi iza kwiimeko ezihlukeneyo kunye nobukhulu kodwa zonke zinesiseko esifanayo. Unomqolo ophakathi obizwa ngokuba yi-trunk. I-trunk-covered covered trunk isekela isakhelo samasebe kunye namacembe abizwa ngokuba isithsaba. Amagatsha, ngokukhawuleza, athwala ingaphandle yamagqabi - kwaye ungalibali iingcambu. Kaninzi "
Izicubu zomthi zidibanisa okanye zifake izicubu, izicubu zengcambu kunye nezicubu ze-vascular. Zonke ezi zicukto ezenziwe ngeentlobo ezininzi zeeseli ziyingqayizivele kummandla wesityalo kunye nemithi ngokukodwa. Ukuqonda ngokupheleleyo imithi yomthi, kufuneka ufunde iifomas ezixhasa, zikhusele, zondle, kwaye zimanzi umthi. Kaninzi "
Uluhlu lweCambial. (IYunivesithi yaseFlorida / i-Landscaping)
Umthi unxulumene nokuphila, ukufa kunye neeseli ezifile ezisebenza ngokufana nesibane esilumkileyo, eshukumisa umbane emthini ukusuka kwizimpande ezifuna amanzi. Iingcambu zihlamba kwisixhobo esinomsoco esondlo esithwala izondlo ezisisiseko kwindawo yokutya apho yonke idliwe okanye idlulileyo. Iiseli zomthi ezingaphetheli kuphela ukuthutha amanzi kunye nezondlo zokushiya i-photosynthesis kodwa kwakhona zenze isakhiwo sonke senkxaso yomthi, sigcine iishukela ezisebenzisekayo, kwaye zibandakanye amaseli athile azalisayo abuye avuselele i-bark ephakathi nangaphandle. Kaninzi "
Kuphi iMithi ePhila
Kukho indawo ezimbalwa eNtshona Melika apho umthi ongenakukwazi ukukhula. Zonke iindawo ezinobungozi kakhulu aziyi kuxhasa imithi yendalo kunye / okanye imiliselwe. Inkonzo yeeHlathi yaseUnited States sele ichaze imimandla emikhulu yamahlathi e-United States apho imithi ethile idlalwa yintlobo. Nazi ezo ndawo. Kaninzi "
Iintlobo ezinkulu zeMithi - iiConifers kunye namaHoldwood
IConifer cluster cluster. (Jon Houseman / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
Kukho amaqela amabini amakhulu emithi eNyakatho Melika - umthi wesithwathwa kunye nomthi onzima okanye umthi ophakamileyo. IiConifers zichongiwe ngamagqabi afana nesalane okanye amaqabunga. Umthi wokhuni obunzima obunzima uchongwa ngamanzi amakhulu. Kaninzi "
Ukuchonga Umthi Wakho Ngenqatha
Amaqabunga kule sityalo ahlelwe ngamabini ahlangene omnye, kunye namabini alandelelanayo kwii-angles ezilungileyo komnye nomnye (i-decussate) ecaleni elibomvu. Phawula iifom eziphuhlisayo kwii-axils zala magqabi. (Marshman / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
Fumana umthi ehlathini, uqoke iqela okanye inaliti uphendule imibuzo embalwa. Ekupheleni kwendlebe nodliwano-ndlebe kufuneka ube nokukwazi ukuchonga igama lomthi ubuncinane kwizinga lezityalo. Ndiqinisekile ukuba unokukhetha kwakhona iindidi kunye nophando oluncinane. Kaninzi "
Kutheni Umthi Kubalulekile
Imithi ibalulekile, ibalulekile kwaye iyimfuneko kubomi bethu. Ngaphandle kwemithi, thina bantu asiyi kuba khona kule planethi enhle. Enyanisweni, amanye amabango angenziwa ukuba ooyise nonina bakhuphule imithi - enye ingxoxo enye indawo. Kaninzi "
Umthi kunye neMbewu yawo
Imbewu yemvula ihluma. (Vinayaraj / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
Imithi emininzi isebenzisa imbewu ukusekela isizukulwana esilandelayo kwihlabathi lemvelo. Imbewu imibroshi yomthi eqala ukukhula xa iimeko zichanekileyo kwaye zidlulisela iimveliso zemfuyo kwisizukulwana esinye kuya kwesilandelayo. Olu hlobo lweziganeko - ukubunjwa kwembewu yokusabalalisa ukuhluma - kuye kwathandeka izazinzulu ukususela ekubeni kukho izazinzulu. Kaninzi "
Umbala womthi weAmbla
Umbala wekwindla umbala weKuigaigahara sansō eNtabeni norikura, Matsumoto, e-Nagano prefecture, eJapane. (Alpsdake / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
I-autumn iyajika ngokutshintsha ngokumangalisayo imibala emininzi yemithi kwihlathi elibanzi. Abanye abantu bafuna ukubonisa umbala ekuwa. Umthi wokuwa uvakalelwa iimeko ezixelela ukuba uvale ivenkile ebusika kwaye uqale ukulungiselela ukushisa kwemozulu ebanda. Iziphumo zinokumangalisa. Kaninzi "
Umthi usalokhu uhleli entwasahlobo. (1brettsnyder / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
Umthi ulungiselela ubusika ekuqaleni kokuwa kwaye uzikhusela ebusika. Amaqabunga awela kwaye iqabunga leqabunga livale ukukhusela amanzi anqwenelekayo kunye nezondlo eziqokelelwe ngethuba lentwasahlobo nehlobo. Umthi wonke uphumelela kwinkqubo ye "hybernation" eyancipha ukukhula kunye nokuphefumula okuya kukukhusela kuze kube yintsasa. Kaninzi "
IiDinosaurs nezilwanyana zasePrince
Yiyiphi Ingxenye Eyona Nzulu Yowwandle?